ဆယ်တန်းဖြေဆိုကြမည့်ခလေးများအတွက် မိဘများပြုလုပ်ပေးရန် အနှောင့်အယှက်ကင်းစေဖို့ အောင်ကြောင်းဖြာ ယတြာ
စာမေးပွဲ ဖြေဆိုစဉ် ကာလအတွင်း အနှောင့်အယှက် ကင်းစေဖို အောင်ကြောင်းဖြာ ယတြာ
တစ်ဘာသာဖြေတိုင်း ဖြေမယ့်နံနက်မှာ အောင်သပြေရွက်တစ်ရွက်ရဲ့အချောဘက်မှာ ခလေးရဲ့အမည် ခုံနံပါတ် ဖြေမယ့်ဘာသာရပ်ကို ဘောပင်ဖြင့်ရေး၍ ပန်းကန်ပြားလေးထဲထည့်ပြီးဘုရားလှူပါ ….
ဖြေပြီးပါက ဖန်ခွက်ထဲထည့်ထားပါ …
ဖြေပြီးရင် ပထမတစ်ရွက်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ထဲပဲဆက်ဆက်ထည့်သွားပေးပါ …
အောင်စာရင်းမထွက်မချင်း ဘုရားစင်ပေါ ်မှာပဲတင်ထားပါ အောင်စာရင်းထွက်ပြီးမှစွန် ့ပြစ်လိုက်ပါ…
ခလေးဖြစ်သူ စာမေးပွဲဖြေနေစဉ် သူရဲ့အကျင်္ ီကိုမိဘဖြစ်သူမှ ရင်မှာပိုက်၍ မေတ္တာပို ့ပေးနေပါ ….
အေးချမ်းပါစေ ကောင်းစွာဖြေဆိုနိူင်ပါစေ အဲဒီလိုပို ့ပေးပါ….
ခလေးလက်ဖြင့် အသက်ကြီးရဟန်းတစ်ပါးအား လက်နှိပ်ဓာတ်မီးလှူခိုင်းပြီး စာမေးပွဲအတွက်ဆုတောင်းခိုင်းပါ ….
အောင်စာရင်းမထွက်မချင်း ” လောကဝိဒူ ” ပုတီးတစ်လုံးချ နေ့စဉ်ပုတီးတစ်ပတ် ပုံမှန်စိပ်ပေးပါ….
အမှတ်စစ် နေစဉ်ကာလတွေမှာလည်း ခလေးရဲ့အကျင်္ ီကိုရင်မှာပိုက်ပြီး အမှတ်စစ်တဲ့ဆရာ ဆရာမတွေ အေးချမ်းပါစေ အေးချမ်းပါစေ လို ့မေတ္တာပို ့ပေးပါ….
စာမေးပွဲကြီးများအတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုစဉ် ကာလအတွင်း အနှောင့်အယှက် ကင်းစေဖို့ ၊ စာကြည့်သောအခါ ဝီရိယစိုက်ထုတ်မှု မလျော့ကျစေဖို့နှင့် ဉာဏ်ပညာ ကွန့်မြူးပြီး ပညာကံ ပွင့်လန်းစေဖို့ မြန်မာ့ရိုးရာ ….
အင်္ဂဝိဇ္ဇာဗေဒင် ပညာ၏ အာစရိယဝါဒပညာခန်းလာ ယတြာအစီရင်ကောင်း တစ်ခုကို ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ ညီငယ်ညီမငယ်များ အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
(၁) တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွား၊ တနင်္ဂနွေနာမည်နှင့် အစပြုသူများအတွက် – တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ တနင်္ဂနွေထောင့်တွင် အုန်း(၆)ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၁)လက် လှူဒါန်းပြီး ပညာရေးအတွက် နှစ်နှစ်ကာကာဆုတောင်းပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသော အခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ် ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟု ခွင့်တောင်းပြောပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျားဆိုပါက ညာလက်သူကြွယ်အပေါ်ဆစ် တစ်ဆစ်၊ မ ဆိုပါက ဘယ်လက်သူကြွယ် အပေါ်ဆစ် တစ်ဆစ် အဆောင်ပြုထားရပါမည်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုသောအခါ အဆိုပါအညွှန့်ကို ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(၂) တနင်္လာနေ့ဖွား၊ တနင်္လာနာမည်နှင့် အစပြုသူများအတွက် – တနင်္လာနေ့ နံနက်၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ တနင်္လာထောင့်တွင် ကံကော်(၁၅)ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၂) လက် လှူဒါန်းပြီး ပညာရေးအတွက် နှစ်နှစ်ကာကာ ဆုတောင်းပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသောအခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ်ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟု လျှောက်ထား ပန်ကြားပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျားဆိုပါက ညာလက်သန်းအပေါ်ဆစ် တစ်ဆစ်၊
မ ဆိုပါက ဘယ်လက်သန်း အပေါ်ဆစ် တစ်ဆစ် အဆောင်ပြုထားရပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသောအခါ အဆိုပါအညွှန့်ကို ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(၃) အင်္ဂါနေ့ဖွား၊ အင်္ဂါနာမည်နှင့် အစပြုသူများအတွက် – အင်္ဂါနေ့နံနက် ၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ အင်္ဂါထောင့်တွင် ဇီး(၈) ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၃)လက် လှူဒါန်းပြီး စာမေးပွဲအတွက် ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသော အခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ် ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟု လျှောက်ထားပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျား ဆိုပါက ညာလက်ညိုးအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ်၊
မ ဆိုပါက ဘယ်လက်ညိုးအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ် အဆောင် ပြုထားရပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသောအခါ ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(၄) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွား၊ ဗုဒ္ဓဟူးနာမည်နှင့် အစပြုသူများအတွက် – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက ်၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်တွင် ရွက်လှ(၁၇) ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၄)လက် လှူဒါန်းပြီး စာမေးပွဲအတွက် ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသောအခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ်ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟလျှောက်ထားပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျားဆိုပါက ညာလက်သန်းအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ်၊
မ ဆိုပါက ဘယ်လက်သန်းအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ် အဆောင် ပြုထားရပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသောအခါ ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(၅) ကြာသပတေးနေ့ဖွား၊ ကြာသပတေးနာမည်နှင့် အစပြုသူများအတွက် – ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ ကြာသပတေးထောင့်တွင် မေမြို့ (၁၉)ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၅)လက်လှူဒါန်းပြီး စာမေးပွဲအတွက် ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသောအခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ်ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟု လျှောက်ထားပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျား ဆိုပါက ညာလက်ညိုးအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ်၊
မ ဆိုပါက ဘယ်လက်ညိုး အပေါ်ဆစ် တစ်ဆစ် အဆောင်ပြုထားရပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသောအခါ ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(၆) သောကြာနေ့ဖွား၊ သောကြာနာမည်နှင့် အစပြုသူများအတွက် – သောကြာနေ့ နံနက် ၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ သောကြာထောင့်တွင် သီဟိုဠ်(၂၁) ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၆)လက် လှူဒါန်းပြီး စာမေးပွဲအတွက် ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသောအခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ် ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟု လျှောက်ထားပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျားဆိုပါက ညာလက်မအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ်၊
မဆိုပါက ဘယ်လက်မအပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ် အဆောင်ပြုထားရပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသောအခါ ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(၇) စနေနေ့ဖွား၊ စနေနာမည်နှင့်အစပြုသူများအတွက် – စနေနေ့ နံနက်၉နာရီမှ ၁ဝနာရီခွဲအတွင်း ဘုရားစေတီ၏ စနေထောင့်တွင် ဒန်း(၁၀)ညွန့်နှင့် တံခွန်အနီ (၇)လက် လှူဒါန်းပြီး စာမေးပွဲအတွက် ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါ။
ထို့နောက် အချိန်အနည်းငယ် ကြာသော အခါတွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ “အဆောင်အဖြစ် ပေးသနားတော်မူပါဘုရား” ဟလျှောက်ထားပြီး တစ်ညွန့်ကို ကျားဆိုပါက ညာလက်ခလယ် အပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ်၊
မဆိုပါကဘယ်လက်ခလယ်အပေါ်ဆစ်တစ်ဆစ် အဆောင်ပြု ထားရပါမည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသောအခါ ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း အဆင်ပြေခြင်း ရှိပါမည်။
(မှတ်ချက် – ဝီရိယစိုက်ထုတ်မှု မရှိသော သူများ ထိုက်တန်သော ကြိုးစားမှုအနည်းငယ်မျှ မရှိသောသူများ အတွက် ယတြာလုပ်ကာမျှဖြင့် စာမေးပွဲအောင်မြင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကြိုတင်သိစေအပ်ပါသည်။
ဉာဏ် ဝီရိယ စိုက်ထုတ်သူများအတွက် ကံတည်းဟူသော အကြောင်းကံ အထောက်ပံ့ကြောင့် အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အရာရာတွင် ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးပါး စိုက်ထုတ်မှသာ အောင်မြင်မည် ဖြစ်ပါသည်။)
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အောင်မြင်မှုအပေါင်းခညောင်းပါစေ……။ဆရာလင်းဝေအောင် (မြန်မာ့ရိုးရာ ဆန်းကျမ်းဗေဒင်နှင့် ကေပီ ရှေ့ဆောင်နက္ခတ်ပညာရှင်)